U-Hebei Lihua Pharmaceutical Co, Ltd. wamkela ngokufudumeleyo abathengi baseRwanda ukuba bandwendwele
U-Hebei Lihua Pharmaceutical uphendula ngokusebenzayo kumgaqo-nkqubo wesizwe "weBelt kunye neNdlela" kwaye wandise ngamandla ukuthengisa kwiimarike zaphesheya kweAfrika. Ngentsasa ka-Epreli 22, umthengi waseRwanda u-kabahizi weza kwinkampani yethu ukuze atyelele kwaye axoxe ngemicimbi yokusebenzisana. Umphathi jikelele we ...
Inkqubo yoPhando ngoThintelo noLawulo lweSwine yaseAfrika, iZiko lamaTshayina leZayensi yezoLimo
ngomphathi ku 19-06-21
I-2019 Nian 5 Yue 24- Ri, isiTshayina iAkhademi yezeNzululwazi yezoLimo isishwankathelo senkqubela phambili sibhengeze "inkqubo yokuthintela umkhuhlane wehagu eAfrika kunye nolawulo lwenkqubo yophando". Emva kokuvela kwendyikitya yehagu yehagu yaseAfrika, iZiko lamaTshayina lezoLimo lwezoLimo ...
I-125th China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, i-Hebei Lihua yezaMveliso yezoMveliso Co., Ltd.
ngomphathi ku 19-05-07
2019 Nian 5 Yue 1 usuku -5 th, 125 th China Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle ebibanjelwe e Guangzhou Pazhou Exhibition Centre. Njengomsitho worhwebo lwamazwe aphesheya, indawo yokuthumela ngaphandle yalo mboniso ibandakanya amalaphu kunye neempahla, umthwalo, inkcubeko kunye nemidlalo, ukutya, izinto zonyango kunye naphakathi ...